PROF:Maxamed Cismaan Jawaari Yaa ka reebay Tartanka Doorashada Aqalka Hoose? -
HomeArimaha bulshadaPROF:Maxamed Cismaan Jawaari Yaa ka reebay Tartanka Doorashada Aqalka Hoose?
PROF:Maxamed Cismaan Jawaari Yaa ka reebay Tartanka Doorashada Aqalka Hoose?
November 28, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ka haray tartanka doorashada golaha shacabka ka dib markii guddiga doorashada heer Dowlad-goboleed ee Koofur Galbeed Soomaaliya uu u diiday in uu siiyo shahaadada tartanka iyadoo xitaa madaxda mucaaradka ay ku eedeeyeen Madaxweyne Farmaajo inuu wax isdaba marin ku sameeyay hanaanka doorashooyinka dalka.
Arintaan ayaa durba khilaaf ka dhex abuurtay Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal iyo kuwa Maamul-goboleedka Koonfur Galbeed oo ku kala aragti duwan is-hortaagga doorashada ee lagu sameeyay Proff Jawaari oo dhawaan ka soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed.
Sabtidii, FIET, ayaa hakisay doorashada kursigii Jawaari loo diiday. Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka ayaa ku eedeeyay madaxweynaha waqtigu ka dhacay Farmaajo iyo C/casiis Lafta-gareen, Madaxweynaha Koonfur Galbeed in ay ka shaqeeyeen qorshaha loogu diiday tartanka doorashada.
Inkastoo FIET, hakiyay tartanka doorashada kurisga HOP103, haddana guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa ku adkeysatay in maanta oo Axada uu ku qaban doono Baydhabo doorashada Kursiga lagu muransan yahay.waxaana doorasho ka dhacday xarunta Baarlamaanka kursigaasi ku qaatay Maxamed Cali Xasan oo ka tirsan xukumadda madaxweyne Laftagareen.
In muddo ah, golaha midowga Musharixiinta ayaa ku eedeynayay madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday Farmaajo inuu qorsheynayo doorashada isaga oo meesha ka saaraya xubnaha ka soo horjeeda ee Aqalka Hoose.
Sabtidii ka dib, Jawaari, oo ah afhayeenka labada jeer, ayaa la kulmay kooxda FIET halkaas oo uu u gudbiyay dhowr dacwadood. Kooxda FIET ayaa wali qiimeynaysa mudnaanta sheegashadiisa taasoo dhalin karta dood kulul haddii la xaqiijiyo.
Jawaari ayaa xilka laga tuuray 2019 ka dib markii ay isku dhaceen Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Xasan Cali Kheyre oo hadda noqday mucaaradka Farmaajo. Waxaa booskiisa la wareegay Maxamed Mursal oo saaxiib dhow la ah Farmaajo.
Farmaajo iyo Lafta Gareen ayaa sidoo kale cadaadis ku haaya Shariif Xasan Sheekh Aadan si ay uga reebaan doorashada Aqalka Hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Villa Somalia ayaa ka hor istaagtay Shariif inuu difaacdo kursigiisa madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed 2018-ka oo lagu qasbay inuu ka haro tartanka.
Dhinaca Galmudug, Cabdishakuur Cali Mire oo saaxiib la ah Farmaajo iyo Yaasiin Faray Agaasimaha KMG ah ee NISA, ayaa loogu doortay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Sida la sheegayo Waxaa soo baxayo cabasho xoogan oo laga keenayo kursiga cabdishakuur cali mire.
Si kastaba ha ahaatee doorashadaan ayaa sababi doonta isku dhacyo dagaal maadaama ay u muuqato mid boob iyo awood sheegasho waxaana laga yaaba in uu dalka yeesho madaxweeynayaal.